Jaamacadda Carabta oo ka hadashay go'aanka ICJ | KEYDMEDIA ONLINE
Jaamacadda Carabta oo ka hadashay go’aanka ICJ
Jaamacadda Carabta ayaa soo dhaweysay go'aankii ka soo baxaya Maxkamada Caalamiga ee ICJ, taasoo in muddo ah ay hor-taallay dacwada buqcada ay ku muran sanaayeen Soomaaliya iyo Kenya.
CAIRO - War-murtiyeed laga soo saaray Shirka Barlamanadda carabta ayaa waxaa si weyn loogu lafa guray go'aankii ka soo baxaya Maxkamada ICJ iyo xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya.
Shirkan oo lagu soo gaba gabeeyey Magaalada Qaahira ee dalka Masar ayay madaxda Barlamanada carabta ee ka qeyb galay waxa ay bogaadiyeen go'aanka ay Maxkamada ICJ ka gaartay muran biyoodkii u dhaxeeyey labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya.
Warkan ka soo baxay Barlamanka Jaamacada Carabta ayaa sidoo kale diiradda lagu saaray xaaladda doorashada Soomaaliya iyo tan amniga, iyagoo madaxda Soomaalida kula taliyey in ay si deg deg ah u dhameystiraan howlaha doorashooyinka.
Dhanka Soomaaliya waxaa shirkaasi u matalyey oo ka qeyb galay Prof Maxamed Cumar Dalxa kaasoo ka mid ahaa Barlamankii iminka waqtigiisu dhamaaday, waxana uu xubnaha Jaamacada Carabta warbixin ka siiyey xaalada dalka Soomaaliya uu iminka marayo.
Prof Dalxa ayaa cod dheer ku sheegay in ay Soomaaliya ay iminka u baahan tahay in laga taageero dhanka amniga iyo dhaqaalaha doorashada, si ay doorashada u noqoto mid taaba gasha.
Jaamacadda Carabta ayaa ugu danbeyntii qoraalka ka soo baxay ku sheegtay in Soomaaliya ay ka caawineyso arimaha doorashooyinka, si dalka uu u yeesho madax baddasha kuwa iminka uu waqtigu ka dhacay.
Marka laga soo tago arimaha Soomaaliya War murtiyeedka ka soo baxay Jaamacada Carabta ayaa sidoo kale looga hadlay xaaladaha dalalka carbeed ee ay ka aloosan yihiin xiisadaha, sida Lubnan, Ciraaq, Liibiya, Falistiin iyo Yamen.